जिममा बढी तौल उठाउने कि कम? – Health Post Nepal
जिममा बढी तौल उठाउने कि कम?
२०७८ पुष १९ गते १२:२५
काठमाडौं – जिममा तौल उठाउने बारे स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने मानिसहरू धेरै प्रकारका आशंकाहरूले घेरिएका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ तिनीहरूले सही के हो बुझ्दैनन्। कसरी र कति वजन उठाउनु पर्छ थाहा हुँदैन।
‘स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ’ को धेरै फाइदाहरू छन्। अन्य फाइदाहरू बाहेक, शरीरमा सन्तुलन कायम राख्न जिम जानु निकै राम्रो मानिन्छ। यसले जोडीहरुमा हुने दुखाइलाई कम गर्न मद्दत पनि गर्छ। उमेरसँगै मांसपेशीमा हुने ढिलोपनलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्छ। साथै तौल घटाउन पनि सहयोग गर्छ।
तर, जिम गएपछि समस्या यो आउँछ कि तपाईंले कति तौल उठाउनु पर्छ? यसमा धेरै विवादास्पद सल्लाह र सल्लाहकारहरू छन्। पावर लिफ्टरहरूले कहिलेकाहीं ‘कि भारी उठाऊ नत्र घर जाउ’ भन्छन्। जबकि अन्य केही हल्का तौल उठाउँदा पनि मांसपेशी कसिलो र साइज बढ्ने मत राख्छन्। अब प्रश्न उठ्छ, भारी तौल बोक्ने कि हल्का?
क्यानडाको म्याकमास्टर युनिभर्सिटीका प्रोफेसर स्टुअर्ट फिलिप्सको अनुसन्धान समूहको २०१६ को अध्ययन अनुसार हल्का तौल उठाउँदा पनि यसले भारी तौल उठाएको जस्तै फाइदाहरू दिन सक्छ। सुरुमा यो सल्लाह अलि बुझ्न गाह्रो जस्तो देखिन्छ, तर त्यसपछि प्रश्न उठ्छ कि उनी कसरी यो निष्कर्षमा पुगे?
अनुसन्धानका क्रममा ४९ ‘वजन प्रशिक्षक’ को दुई समूह बनाएर १२ हप्ताको तालिम कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। प्रत्येक सहभागीको लागि तिनीहरूले ‘वन रेपिटिशन म्याक्सिमम’ (एक आरपिएम) सेट गर्छन्, जुन एक व्यक्तिले उठाउन सक्ने सबैभन्दा भारी वजनमा ‘सेट’ गरिन्छ। त्यसपछि हल्का वजन उठाउन सक्नेले २०-२५ पटक वजन उठाउन सके भने भारी वजन उठाउनेले ८-१२ पटक मात्र उठाउन सके।
म्याकमास्टरको अध्ययनमा के बाहिर आयो भने फरक-फकर वजन उठाउँदा पनि शक्ति र मांसपेशी वृद्धि दुवै समूहमा बराबर नै थियो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, कम तौल धेरै पटक उठाउनु र भारी तौल कम उठाउनुले कुनै फरक पार्दैन। पछिल्लो अनुसन्धानको नतिजा पनि यस समूहले गरेको पुरानो अध्ययनसँग मिल्दोजुल्दो थियो।
अब प्रश्न यो आउँछ कि, हामी सबैको लागि यसको अर्थ के हो त?
यसको मतलब तपाईंले भारी वजन वा हल्का तौल उठाएर पनि परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर, कुरा के हो भने तपाईं आफ्ना मांसपेशीहरु लाई सामान्य भन्दा बढी काम गर्न अनुमति दिनुस्। तपाईंले नतिजामा पुग्नको लागि थकित नहोउन्जेल सधैं तौल उठाइरहनु पर्दैन। तर, तपाईंको मांसपेशीहरुले सामान्यरुपमा गर्नुसक्ने कामभन्दा बढी गर्न दिनुपर्छ।
सेन्ट मेरी युनिभर्सिटी, ट्विकेनह्यामका स्ट्रेन्थ एण्ड कन्डिसनिङ कोच रिचर्ड ब्लाग्रोभले १ देखि १० को स्केलमा १० पटक तौल उठाउँदा मांसपेशीहरू थकित हुन्छन् भने सात देखि आठ पटक दोहोर्याउनु राम्रो हुने बताए। यदि तपाईंको मांसपेशीले हप्तामा एक पटक ‘ओभरलोड’ महसुस गरिरहेको छ भने, तपाईंको शरीरले यसलाई स्वीकार गर्नेछ र बलियो हुनेछ।
यदि तपाईं मांसपेशीहरु अझ बलियो भइरहुन भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईंले लगातार वजनको मात्रा र तपाईंले यसलाई एकैपटक दोहोर्याउनु पर्ने संख्याको बढाउनुपर्ने हुन्छ। ताकि, तपाईंका मांसपेशीहरूलाई ‘कम्फर्ट जोन’भन्दा बाहिर लैजान सकियोस्। केही दिनको प्रयासमा नै तिनीहरू यसमा अभ्यस्त हुन्छन्।
यदि तपाईंले उठाइरहेको तौल सहज भइरहेको छ भने यसको मतलब उक्त भारले तपाईंलाई धेरै उपयोगी नहुन सक्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि, तपाईंसँग सुरक्षित एक वजन कार्यक्रम हुनुपर्दछ, जसका लागि तपाईंलाई एक प्रशिक्षित व्यक्तिको आवश्यकता हुन्छ। तर, जबसम्म तपाईं पावर लिफ्टर वा बडीबिल्डर बन्न चाहनुहुन्न, तपाईंले कति तौल उठाउनु पर्छ र कति पटक दोहोर्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा नअल्झिनुस्। मांशपेशी बलियो बनाउन र बलियो बन्न नियमित रूपमा जिम जानु र कम्फर्ट जोनबाट आफूलाई बाहिर ल्याउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ।